shwezinu: ဆရာစောနေဝင်း (ရူပဗေဒ) ၏ ကျွန်တော့်အသည်းမာခဲ့ပါတယ်
thank u so much ur post. could u tell me where is Dr Aung Min's Clinic or address or anything else!
bcoz my dad has C (+) and i'm looking after him everyday.
Dr Aung Min ဘယ်မှာ နေလည်း တော့ မသိဘူး ဒါပေမဲ့ အဲဒီအဖွဲ့ ထဲမှာပါတဲ့ အောင်သူလဘ္ဘက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုတော့ သိပါတယ် ကျနော် မေးကြည့်ပြီး အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ် အီးမေးလ် လိပ်စာ ပေးထားပါလား
Dr.အောင်မင်းရဲ့ ရန်ကုန်လိပ်စာလေးသိချင်တယ်ဗျာ။ ကူညီပါအုန်း
I'd already made an mail directly to ur mail "shwezinu1961@gmail.com".
thank u so much ur kind help.
မမရွှေဇင် ညီမ အစ်မ page ကိုနေ့တိုင်း စာတွေလာလာဖတ်ဖြစ်တယ်… စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေဖတ်ရတဲ့ အတွက် အစဉ်အမျြဲကျးဇူးတင်လျှက်ပါရှင်။ ။
တစ်ခါမှတော့ မှတ်ချက်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး…အခု ဒီပိုစ့်လေးအတွက်လဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အလှူငွေလေး နဲနဲတတ်နိုင်သလောက်လေး လှူဒါန်းချင်ပါတယ်ရှင့်။
အစ်မကနေတစ်ဆင့် လှူဒါန်းပေးလို့ ရနိုင်မလား သိပါရစေရှင့်။
ကျနော် အဖွဲ့ ကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါမယ် ... ဆက်သွယ်လို့ ရရင် လှူဖို့အကူအညီပေးပါမယ် ...
ဆရာဦးစောနေ၀င်း ဖုန်းနံပါတ် 2025445